DEPIOTE TSARADIA MARCO : “Tsy tokony havela hiasa irery ny Filoham-pirenena”
Hita amin’ny fandraisana andraikitra ataon’ny Filoham-pirenena ny finiavany te hampandroso an’i Madagasikara. 4 novembre 2019
Ao aminy ny tena fitiavan-tanindrazana marina. Tsikaritra anefa, hoy ny Depiote Tsaradia Marco, voafidy tao Ampanihy fa toa miasa irery ny Filoha raha oharina amin’ireo mpikambana sasantsasany eo anivon’ny Governemanta izay miraviravy tanàna sy variana mifampijery fotsiny. « Maro ny zavatra nifamahofaho tato ho ato, misy zava-baovao hatrany isan-kerinandro. Tena manao ny ainy tsy ho zavatra ny Floham-pirenena, Andry Rajoelina amin’ny fitantanana ny firenena saingy misy amin’ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta sy ny manodidina azy no faly manipy hoditr’akondro fotsiny fa tsy mba mijery ny tombontsoan’ ny firenena », hoy ny Depiote Tsaradia Marco. Nambarany koa fa tsy mora ny manarina ny firenena efa latsaka an-katerena sy tsy mba nahita masoandro nihiratra nandritra ny taona maro. Mila mpitarika toa an’ny Filoham-pirenena izany, hoy izy. Mpitarika mavitrika ary mpitarika manana fanapahan-kevitra hentitra hampandrosoana ny firenena. Rehefa misy olona manolo-tena sy vonona ho an’ny firenena tahaka izao dia tokony mba ho maro koa ny manampy azy na aiza na aiza sehatra misy ny rehetra. Tsy vitan’ny olona iray ny fampandrosoanna ny firenena.
Efa eo ny Filoha hitarika, ka isika sisa no andrasana. Anjarantsika ny manapa-kevitra na handroso isika na hiemotra” hoy hatrany ity Depiote ity. Ankoatra izay dia nomarihiny koa fa fotoana izao hanovana ny teotsain’ny Malagasy rehetra ho liam-pandrosoana. Tsy ho variana mifanaratsy na mifanimba an-toerana fotsiny. “Mila samy mandray ny anjara tandrify azy avy ny tsirairay amin’ny toerana misy azy. Isika rehetra miaraka no hampalaky ny fampandrosoana ny firenena.” Notsipihiny koa fa tokony hametra-pialana ny tompon’andraikitra iray rehefa mahatsapa fa tsy voafehiny ny asa sy andraikitra napetraka taminy.